Aeroflot waxay dib u bilawday duulimaadyadeedii caadiga ahaa ee Kyrgyzstan, Belarus, Kazakhstan iyo South Korea
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Aeroflot waxay dib u bilawday duulimaadyadeedii caadiga ahaa ee Kyrgyzstan, Belarus, Kazakhstan iyo South Korea
Airlines • Aviation • Belarus Jebinta Wararka • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kazakhstan • Wararka Kyrgyzstan • News • Dib-u-dhiska • Wararka Ruushka • Wararka Kuuriyada Koonfureed • Dalxiiska • Gaadiidka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Calanka Ruushka, Aeroflot, ayaa ku dhawaaqay in adeegga caalamiga ah ee u dhexeeya Moscow iyo Kyrgyzstan (Bishkek), Belarus (Minsk) iyo Kazakhstan (Nur-Sultan) dib u bilaabi doono toddobaadka soo socda. Adeegga joogtada ah ee u dhexeeya Moscow iyo South Korea (Seoul) wuxuu dib u bilaabmi doonaa 1 Oktoobar.
Duulimaadyada caasimadda Kyrgyzstan waxay bilaabmayaan 23ka Sebtembar. Duulimaadka SU1882 Moscow-Bishkek waxa ay shaqayn doontaa hal mar todobaadkii, Arbacada, Duulimaadyada soo laabashada SU1883 Bishkek-Moscow waxa ay shaqayn doontaa Jimcaha.
Duulimaadyada Belarus SU1842 Moscow-Minsk iyo SU1843 Minsk-Moscow waxay shaqayn doonaan hal mar todobaadkii, Sabtida, laga bilaabo 26ka Sebtembar.
Duulimaadyada caasimadda Kazakhstan ayaa dib u bilaaban doona 27ka Sebtembar. Duulimaadyada SU1956 Moscow-Nur-Sultan iyo SU1957 Nur-Sultan-Moscow waxay shaqayn doonaan hal mar todobaadkii, maalmaha Axada.
Aeroflot ayaa u duuli doonta caasimadda Kuuriyada Koonfureed todobaadkiiba hal mar maalmaha Khamiista (SU0250 Moscow-Seoul). Duulimaadka soo laabashada, SU0251 Seoul-Moscow, waxay shaqayn doontaa Sabtida.
Sida taraafikada hawada caalamiga ah ay u soo kabsato, duulimaadyada duulimaadyada ee wadooyinkan ayaa laga yaabaa in la hagaajiyo.
Badbaadada Hawsha Duulimaadyada Itoobiya ee Cidhifka ah?